Inhlanzi yabesifazane ingenye yezinkinga ezacatshangelwa eminyakeni eyizinkulungwane eziningana edlule. Kodwa yikuphi ngempela ukuhlaziya futhi lokhu kujwayelekile kuvamile kwabesifazane?
Amaqiniso ambalwa avela emlandweni
Ngesihlandlo sokuqala, udokotela owaziwayo uHippocrates wayehlanganyele ekucwaningweni kwe-hysteria, owaqamba lesi senzakalo esivela egameni lesiLatin elithi "isibeletho", okusho ukuthi "isibeletho". Ngokusho kukaHippocrates, lesi sibeletho sithinteka emzimbeni wesifazane futhi sibambelele ezithombeni, kubangele imizwa nempawu ezihlukahlukene zesifo.
Kodwa umqondo oyinhloko we-hysteria wenziwa, empeleni, ekhulwini le-20 elikhanyisiwe. Ucwaningo lwakhe lwalusebenzelana noFreud, uJung. Ngaphezu kwalokho, cishe bonke ochwepheshe abathintekayo ekutadisheni kwengqondo yabantu bazinikezela ingxenye yokuphila kwabo ekuhloliseni imvelo, kodwa babengenakucacisa inkinga.
I-Hysteria: ingabe inhle noma imbi?
Ngisho nanamuhla, zonke izici zithinta i-hysteria ngendlela yakhe. Ngakho-ke, abanye babo bacabanga ukuthi lesi sizwe sokwehlukana nomkhuba, kodwa iningi labacwaningi lafinyelela ekuphetheni ukuthi lokhu kuyisimo somzwelo esiwusizo kakhulu.
Okubaluleke kakhulu ukubonakaliswa kwemizwelo yabesifazane, ababuthakathaka kakhulu kunamadoda ngokomzimba, kodwa ngesikhathi esifanayo kumele babe namanye amathuba okuthonya imvelo. Lokhu ukusabela kudala nje umuzwa wokuthi ngaphambi kwethu owesifazane okhethekile onomuntu siqu, onamandla okuthonya hhayi imvelo kuphela, kodwa nokushintsha isimo sakhe somuntu siqu.
Kuziphi izimo ukubonakala kwe-hysteria kubonakala?
Ukufunda nge-hysterical kubalulekile ukuqala sdetstva. Kuvela ukuthi zonke izinyane, kungakhathaliseki ubulili bakhe, zinendlela okuthiwa yi-hysterical reaction mechanism, okuyivumela ukuba azivumelanise ngokushesha nemvelo futhi ayifunde ngokushesha, futhi okubaluleke kakhulu, ukuthola inani elikhulu lolwazi. Kuyingozi kakhulu enye yezindlela ezinika izingane ithuba lokuthola nokuqhuba iminyaka engama-7 imininingwane eningi umuntu angayinqoba kusukela eminyakeni engu-7 kuze kube sekupheleni kokuphila.
Kulabo besifazane, indlela yokuphendulela i-hysterical ivumela, okokuqala, ukwazi umhlaba ozungezile ngaphandle kokuqaphela kwayo. Uma ulwazi ludlula ekuqapheliseni, owesifazane uqala ukuyihlaziya, bese ulwazi lutholakala ngevolumu encane kakhulu. Yingakho i-hysteria engeyona isifo noma isibonakaliso sesifo sesimiso sezinzwa.
Yiqiniso, kanengi sithembela ezimweni zansuku zonke, sithi lo wesifazane noma lowo wesifazane ungumuntu ohlambalaza, ingqondo ye-psychopath engakwazi ukuphendula ngokuthula ngesimo futhi ifinyelele kwezinye izindlela, ezibuhlungu. Izinkulumo ezinjalo ikakhulukazi esizizwa kulabo abaqaphela ukuthi owesifazane uveza kanjani imizwelo yakhe.
Kodwa uma ubheka isimo kusuka kolunye uhlangothi, kuvela ukuthi ukuzonda - lokhu kuyisici sabo bonke abesifazana, ngaphandle kwalokho kunzima ukubeka phakathi kwabameleli besini elihle.
Ubonile ngokuphelele, ongenakwazi ukukhombisa imizwelo yakho emphakathini, abesifazane, abazithola ngokwabo? Iqiniso liwukuthi, ahluke kakhulu kumadoda.
Kuvela ukuthi amanothi e-hysterical omlingiswa - kufana nokuhlukana kobuntu, okuvumela owesifazane ukuba anethonya ngobuhle imvelo ngokujwayelekile, kanye namadoda athile.
Kunombono wokuthi embusweni wezilwane kunezinto ezibizwa ngokuthi i-pheromones, eheha abantu bobulili obuhlukile. I-zhemehanizmom enjalo emvelo ingabhekwa njenge-hysteria, okuyinto efana ne-pheromone yentela, eheha ukunakwa, ngokusetshenziswa ngobuchule ekukhulumisaneni nabanye.
Omunye umbuzo wukuthi kunabesifazane abanjalo, ngokuvamile futhi abanakho ngobuciko, babonisa isimo sabo sokwehla, futhi ukukhulumisana kwabo kuyaba nzima kakhulu. Kodwa-ke, uma i-hysteria iboniswa kahle ngokuzithoba, ngobumnene, khona-ke ingahlotshaniswa nobuciko besifazane abenza kubantu abakuzungezile.
Qaphela ukuthi ekuqaleni kweminyaka engu-90 ukukhishwa kwegazi kwakungekho ekuhlukanisweni kwezifo zomhlaba wonke, okusho ukuthi ngisho nowesifazane okhuthele ngokweqile ophendula ngokubhekene nalesi simo kubhekwa njengomuthi okwanele. Ukuzivocavoca kubonisa ukuthi intombazana enesizotha iyakwazi ukubangela isithakazelo esiqotho emadodeni, kuyilapho abantu abakhulu bengathola ukunakwa okungenani.
I-NLP yothando: imithetho emihlanu eyinhloko yokuhlela kwabantu
Indlela yokubhekana nokucasula nokwesaba
Ukuqonda ukuthi umfana usethandweni, kodwa uyasifihla
Izambatho zebhizinisi lebesifazane zehhovisi
Ukuthuthukiswa kwengane kusukela eminyakeni engu-3 ukuya kweyisithupha
Izaqathe ezifile eMinsk
Kulebyaka ezinezigcwaliso ezine
Indlela yokuqinisa izinwele ekhaya?
Ama-bhisikidi ane-hazelnut ne-espresso
Ukuzivocavoca okuphumelelayo nge-barbell: yinkimbinkimbi emzimbeni wonke
Ungayithuthukisa kanjani izinwele ezinomile kakhulu nezinwele?
Ode to Motherhood kusuka Dolce & Gabbana eMilan Fashion Week
Home Library - ukuziqhenya komuntu wonke
Kungani abantu besaba ukubonisa imizwa